Xildhibaan Farxiya Muumin “Matalaada Gobolka Banaadir ma ahan in la baryo” – Kalfadhi
Xildhibaan Farxiya Muumin “Matalaada Gobolka Banaadir ma ahan in la baryo”
June 30, 2020 June 30, 2020 Hassan Istiila
Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa todobaadkan si aqlabiyad leh u meel-mariyay in Gobolka Banaadir uu 13-ku ku yeesho Aqalka Sare ee Baarlamaanka, kaddib codeyn Baarlamaanka uu sameeyay.
Xildhibaan Farxiya Muumin Cali oo ka hadleysay dooda xeerka matalaada Gobolka Banaadir, ayaa aaminsan in matalaada Gobolka Banaadir aysan aheyd in la baryo.
Qodobka koowaad ee Dastuurka ayaa qoraya in qof kasta oo Soomaaliyeed uu xaq u leeyahay in la doorto isaganna uu wax doorto, sidaasi awgeed 3 milyan oo Gobolka Banaadir deggan ayaa loo diiday in la doorto iyo in ay wax doortaan, ayey hadalkeeda sii raacisay.
“Saddexda milyan ee ku nool magaalada Mogadishu, waxaa ay xaq u leeyihiin caafimaad, waxbarasho iyo matalaad siyaasadeed”.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga mahadceliyey Guddoonka iyo Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya tixgelinta iyo fulinta codsigii Madaxweyne ee ku aaddanaa xaqiijinta Matalaadda siyaasadeed ee Gobolka Banaadir, taas oo uu ku soo jeediyey furitaankii Kal-fadhigii 7aad ee Baarlamaanka.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay muhiimadda go’aankan taariikhiga ah oo aan horey loogu dhiirran, in uu ku yimid dadaal wadajir ah oo ay muujiyeen shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed oo maanta ay ka go’an tahay in la sii amba-qaado hannaanka dimuqraadiyadda loo dhan yahay ee dalka.
Golaha Waliikada Puntland ayaa caddeeyay in ay sharci darro tahay ansixinta kuraasta Aqalka Sare ee matalaada Gobolka Banaadir, waxaana ay sheegeen in arrintaasi ay ka hor imaaneyso Dastuurka gaar ahaan qodobka 72-aad, kaas oo sheegaya tirada xubnaha Aqalka Sare, sidoo kale waxaa uu ka hor imaanayaa qodobada, 63-aad,71-aad, 79-aad, 132-aad, 133-aad iyo 134 ee Dastuurka KMG ee dalka.
Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay in Soomaaliya loo doortay Guddoominta Golaha Guud ee QM
Golaha Shacabka oo ansixiyay Xeerka Asteynta Kuraasta Baarlamaanka Federaalka